Geeridu waa waxa kaliya ee u Dambeeya Qulqulka - WEBTOON ONLINE
Geeridu waa waxa kaliya ee u Dambeeya Qulqulka Celceliska 4.8 / 5 ka mid ah 11
N / A, waxay leedahay 16.3K views
Penelope Eckart dib ayey u dhalatay sida gabadha la korsaday ee Duke Eckart iyo aqal galkii arooska haray. Dhibaatadu waxay tahay, waxay gashay ciyaarta iyada oo ku jirta dhibkeedii ugu adkaa, iyo waxkastoo ay sameyso, geerida ayaa iyada sugeysa dhamaadka! Ka hor inta 'gabadha dhabta ah' ee Duke Eckart ay soo muuqato, waa inay doorataa mid ka mid ah ragga hogaaminta oo ay gaaraan dhamaadka farxad leh si ay u noolaato. Laakiin labada walaalo ah had iyo goor waxay la dagaallamaan iyada wax kasta oo yar, iyo waliba amiir taaj oo waalan, oo jidadkiisuna dhammaantood horseedda dhimasho. Waxaa jira xitaa saaxiriin kaasoo ku riyaaqa hoggaaminta dumarka, iyo addoonka aaminka ah! Laakiin si kastaba ha noqotee, mitiryada u roonaanta ragga ayaa horseedi doonta inay sii gudubto xariiqda iyaga!
Cutubka 47 February 22, 2021
Cutubka 46 February 12, 2021
Cutubka 45 February 12, 2021
Cutubka 41 October 26, 2020
Cutubka 40 October 26, 2020
Cutubka 38 October 26, 2020
Cutubka 37 October 26, 2020
Cutubka 36 October 26, 2020
Cutubka 35 October 24, 2020
Cutubka 34 October 24, 2020
Cutubka 33 October 24, 2020
Cutubka 32 October 24, 2020
Cutubka 31 October 24, 2020
Cutubka 30 October 24, 2020
Cutubka 28 September 22, 2020
Cutubka 27 September 22, 2020
Cutubka 13 Waxaa laga yaabaa 26, 2020
Cutubka 0 Waxaa laga yaabaa 12, 2020
Amiiradii la iloobay
Loola dhaqmo sidii shey